भाटभटेनी मार्किट चाही बन्द हुनु हुदैन किन हो ५ सरकार ? – Sajha Pati
काठमाडौ । नेपालमा लकडाउन, शट्डाउन, जनतालाई अनुरोध, हुकुम, आदेश, होटल मल, सलुन, पार्टी प्यालेस लगायत बन्दको उर्दि तर राष्ट्रपति भण्डारीको सरकार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार, केन्द्रिय सरकार, संघिय सरकार, स्थानिय सरकार सबै सरकार मिलाएर ५ सरकार । यि ५ सरकारको नियत के हो खै बुभ्mनै सकिएन ? सबै बन्द तर भाटभटेनी मार्किट चाही बन्द हुनु हुदैन किन हो ५ सरकार ?
सुनिएको थियो पूर्व माओवादिका सुप्रिमो राप र ताप नभएका प्रचण्ड लगायतका नेता अभिनेताको लगानिमा पैmलिएको भाटभटेनी मार्किट हो भन्थे । होईन होला लाग्थ्यो तर अब चाही शतप्रतिशत हो भन्ने लाग्छ ? कमिशनको खेलहो भन्ने सुनेको थिए तर विश्वास थिएन तर साच्चै हो लाग्छ सरकार ?
आम जनता, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी सबै कोरोना संक्रमणको चपेटामा आईरहेका छन् । बढी आवत जावत हुने स्थलहरु बन्द गर्न गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सञ्चारकर्मीहरुलाई सचेत रही समाचार संकलन गर्न अनुरोध गरेको छ । तर बढी आवत जावत र भीडभाड हुने स्थानमध्य त्यो क्याटोगरी भित्र भाटभटेनि शायद पर्दैन कि क्या हो सरकार मेरो प्रश्न ? जनता न रहे न तिम्रो सरकार रहन्छ न तिमि रहन्छौ । पछि कमीशन कोले खाने हो सरकार ?